'राजनैतिकसंगै प्रशासनिक स्थिरता आवश्यक'
जनतापाटी डेस्क २२ चैत ।
काठमाडौं । नेपालमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । लगानी सम्मेलनमा विभिन्न ४० देशका ६०० भन्दा बढि लगानीकर्ता सहभागी भए । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका गरि ७७ वटा परियोजनाहरु लगानीकर्तामाझ तामझामले प्रस्तुत गरियो । जसमा १५ वटा विभिन्न परियोजनाहरुमा लगानीकर्ताहरुले हस्ताक्षर नै गरिसके ।
सरकारले उक्त सम्मेलन उत्साहपूर्वक सम्पन्न गरेको बताईरहेको छ । यो लगानी सम्मेलनलाई फरक फरक तरिकाले बयान गर्नेहरु पनि रहेका छन् । कसैले लगानी सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको बताईरहेका छन् भने कसैले अनावश्यक प्रचार गरिएको तर्क गरिरहेका छन् ।
विगतको लगानी सम्मेलनमा गरिएका लगानीका प्रतिवद्धताहरुलाई पुरा नगरिसकेको अवस्थामा अहिलेको सम्मेलनले कत्तिको लगानी भित्र्याउन कत्तिको भूमिका खेल्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर पनि यसलाई फरक फरक ढँगले चर्चा गर्न थालिएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् । उनले मुलुकमा लगानी गर्ने वातावरण नै नभएको बताउँदै पहिले मुलुकमा शान्ति, स्थिरता तथा सुशासन कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जनतापाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारले लगानी सम्मेलन आफ्नो चर्चाका लागि मात्रै गरेको दावी गरे । प्रस्तुत छ, डा. महतसँग जनतापाटीकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पूर्व अर्थमन्त्रीको हैसियतले हेर्दा लगानी सम्मेलन कस्तो रह्यो ?
सरकारले सम्मेलन गर्‍यो, राम्रै भयो । तर सरकारले लगानी सम्मेलनको धेरै नै चर्चा गर्‍यो । चर्चा गरेर मात्रै लगानी आउने हैन । पहिला त मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन सक्नुपर्‍यो । मुलुकमा खै शान्ति छाएको ? मैले पहिले देखिनै भन्दै आएको छु, प्रचार र सम्मेलन गरेर मात्रै लगानी जुट्ने हैन । यसका लागि त पहिले सरकारले सुशासन राम्रो बनाउनुपर्छ । प्रशासन सुदृढ हुनुपर्छ । समयमा निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्‍यो । प्रशासनिक झमेलाहरुबाट मुक्त हुनुपर्‍यो । भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनपर्‍यो । खै यस्तो ? यी सबै सुधारहरु भएपछि मात्रै मुलुकमा लगानी बढ्न थाल्दछ । कानुनमा आवश्यक सुधार गर्दै पनि जानुपर्छ । यसकारण लगानी वृद्धिका लागि मुलतयः हाम्रो आन्तरिक वातावरण शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । यसका साथै हाम्रा नियम कानुनहरु लगानीमैत्री हुनुपर्छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरुबाट सकेसम्म धेरै लगानी जुटाउनुपर्‍यो । अहिले लगानी सम्मेलन भयो राम्रै भयो । तर सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, लगानीकर्ताहरुसँग बसेर प्रस्ताव राख्दैमा लगानी आउने भन्ने होईन । यो त केवल प्रस्ताव मात्रै हुन् । यसको लागि त देशको अवस्था सुदृढ हुनुपर्छ । त्यसै लगानीको आश गरेर हुन्छ ?
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरु पनि प्रस्तावित परियोजनामा राखिएको छ, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
सरकारले अहिलेको लगानी सम्मेलनमा १५-१६ वटा परियोजनामा लगानी सम्झौता गरियो भनेको छ । तर कतिपय महत्वपूर्ण सम्झौताहरु पहिले नै भैसकेको छ । जस्तो, अरुण तेस्रो निर्माणाधीन अवस्थामा छ । त्यस्तै, अपर त्रिशुली ‘ए’ कोरियन लगानीमा काम भैरहेको छ ।
यो कुनै नयाँ आयोजना होईन, चालृु आयोजना नै हो । यो पनि लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भयो भनेर देखाएको छ । यस्तै, कालीगण्डकी गर्ज धेरै अगाडी नै चीनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको योजना हो । चौधरी ग्रुपले चार/पाँच वटा परियोजनामा लगानी गर्छु भनेर प्रस्ताव गरेको छ । यो पहिले देखिनै चौधरी ग्रुपले नै गरिरहेको छ । त्यो त, अधिकांश आन्तरिक लगानी नै हो ।
यसले के देखिन्छ भने, लगानी सम्मेलनबाट धेरै नयाँ प्रस्तावहरु आएका छैनन् । विगतकै प्रस्तावहरु देखाईएका छन् । लगानी सम्मेलन सफल भयो भनेर देखाउनका लागि पनि विगतका चालु योजनाहरुलाई देखाईएको छ । कतिपय चाहिँ बैंकहरुबाट ऋण लिन बाँकी थियो । अहिले सम्झौता भयो । लगानी सम्मेलन नभएको भए पनि यो काम अघि बढिरहन्थ्यो । यो चाहीँ लगानी सम्मेलन सफल भयो भनेर देखाउन मात्रै राखिएको हो ।
सरकारले जान्दाजान्दै पनि सम्मेलनमा दोहोर्‍याएर परियोजना प्रस्ताव गरेको हो ?
सरकारमा केटाकेटीपन हावी छ । हरेक चिजलाई उहाँहरुले हल्का रुपमा लिनुहुन्छ । यसकै परिणाम हो यो । लगानी भित्र्याउन सरकार गम्भिर देखिँदैन । कुरा स्पष्ट छ । सरकारले लगानी गर्नुपर्ने खालका कुनै योजनाहरु प्रस्तुत गरेको छैन । सरकारले पर्याप्त अध्ययन नै गरेको छैन ।
निजी क्षेत्रहरु आकर्षित हुने खालका धेरै योजनाहरु पनि छैनन् । पुर्वाधारमा लगानी सरकार आफैँले गर्नुपर्ने हो । तर विदेशीलाई गर्न भनिएको छ । ७७ वटा योजना प्रस्तावका लागि मात्रै राखिएको हो । अध्ययन गरेर राखिएको भने होईन । निजी लगानी आकर्षित हुने खालका वा अध्ययन गरिएका आयोजनाहरु सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएको थिएन । जलविद्युत, कृषि जस्ता आयोजनालाई खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
विगतका र अहिले सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा कत्तिको फरक रह्यो ?
लगानी सम्मेलन हुँदैमा लगानी आईहाल्ने होईन । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनहरुमा २०५० सालको सम्मेलन निकै सफल भयो । यसबाट धेरै नै ठुला आयोजनाहरुमा काम सम्पन्न भयो । तर अघिल्लो तीन वर्षमा पनि लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । यसमा झण्डै १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएका थिए । तर देशको अवस्था राम्रो नभएका कारण लगानी आउन सकेन ।
त्यसैकारण पनि सम्मेलन हुनेबित्तिकै लगानी भित्रने भन्ने हुँदैन । लगानी भित्रनका लागि अरु धेरै प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्छ । धेरै अवस्थाहरुमा सुधार हुनुपर्छ । सम्मेलन गरेर, धेरै भाषण गरेर मात्रै लगानी आकर्शित गर्न सकिँदैन । लगानी सम्मेलन भनेको देशको स्थिती के छ भन्ने कुरा जानकारी मात्रै गराउने हो ।
स्थिर सरकार भएर पनि लगानी गर्ने वातावरण नभएकै हो त ?
के हो स्थिर सरकार भनेको । ५ वर्ष सत्ता चलाउछु भनेर गम्किएर मात्रै हुने हो कि काम पनि गर्नुपर्ने हो ? प्रशासनमा ६/६ महिनामा, ४/४ महिनामा फेरबदल हुन्छन् । सुशासन यसलाई मान्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । जे काम गर्दा पनि भ्रष्टाचार भएकै छ ।
राजनैतिक स्थिरताका कारणले मात्रै होइन प्रशासनिक स्थिरता पनि हुनुपर्‍यो । सुशासन पनि हुनुपर्‍यो । झमेला दिनेखालको प्रशासन हुनुभएन । देशमा अझै पनि कतिपय ठाउँमा बम पड्कीरहेको छ । विष्फोटहरु भैरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आतंकित तुल्याउने काम भैरहेको छ । खै शान्ति सुरक्षा ?
तर, सरकार त स्थिर भएकै कारण विदेशी लगानी भित्रनेमा विश्वस्त देखिन्छ नि ।
आफैँ दङ्ग हुनुहुन्छ उहाँहरु । उहाँहरु आत्मरत्तीमा प्रशन्न हुनुहुन्छ । आफैँ रमाईलो मानिरहनुभएको छ । प्रचारले मात्रै विकास हुने होईन । भाषणले मात्रै विकास हुने हो ? सरकारले कहिले गर्व गरेको छैन त ? उहाँहरुले त चुनाव जितेका दिन देखि नै गर्व गरिरहेका छन् । तर मुलुकले गर्व गर्ने ठाउँ देखिनुपर्‍यो नि । खै देखिएको ? कहाँ छ गर्व गर्न लायक काम भएको ?
लगानीको वातावरण खै ? नेप्सेको इन्डेक्स घटेको घटै छ । १८ सयमा पुगिसकेको नेप्सेको इन्डेक्स अहिले ११ सय हाराहारीमा झरेको छ । करप्सन इन्डेक्स बढिरहेको छ । देशमा शान्तिसुरक्षा कायम भएको छैन । यसकारण मुलुकले गर्व गर्नुपर्ने स्थिती छैन । यसले लगानीको लागि राम्रो सन्देश दिँदैन ।
के लगानी सम्मेलन केवल चर्चामै सिमित भयो त ?
सरकारले काम देखाउनका लागि मात्रै सम्मेलन गरेको हो । चर्चा कमाउने उद्देश्य पनि होला । उहाँहरुलाई सम्मेलनबारे जानकारी नभएको पनि हुन सक्छ । सरकारमा बसेकाहरु जानकार पनि नभएका होलान् । सम्मेलन भएपछि लगानी आइहाल्छन् भन्ने पनि होला । सरकारमा बस्नेहरुलाई यसबारे राम्रो अवगत नभएको पनि होला । नियत नै खराब भनेर भन्न त सकिन्न तर उहाँहरुको उद्देश्य चाहिँ बढि मात्रामा राजनैतिक लाभ दिने उन्मुख छ । काम भन्दा प्रचार बढि देखिन्छ ।
७७ परियोजना प्रस्तुत गरेपनि १५ वटामा मात्रै प्रतिबद्धता आउँदा लगानीकर्ता आकर्षित नभएको भन्न सकिन्छ ?
पक्कै पनि । अन्य परियोजनामा न लगानीकर्ता आकर्षित भए, न लगानीको सम्भावना देखियो । त्यहि १५ वटामा पनि ६/७ वटा त झन् पहिलेदेखि नै चालु भैराखेका र स्वदेशी लगानीमै काम बनिरहेका परियोजनाहरु छन् । अरुण तेस्रो, अपर त्रिशुली ‘ए’, कालीगण्डकी गर्ज, चौधरी ग्रुपले अगाडी बढाएका योजनाहरु कुनै नयाँ योजना होइनन् ।
विदेशी लगानीमा मात्रै भरपर्दा यसले मुलुकमा जुनसुकै समयमा आर्थिक संकट ल्याउन सक्छ भन्ने विष्लेषण हुने गरेका छन् । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यो चाहिँ नबुझ्नेहरुले भन्ने कुुरा हो । जुन–जुन मुलुकहरुमा आर्थिक सम्पन्नता भएको छ, त्यहाँ धेरै विदेशी लगानी भएका छन् । अहिलेको संसारमा आन्तरिक लगानीले मात्रै आन्तरिक वचतले मात्रै मुलुकको तिव्र विकास हुन सक्दैन ।
देशलाई सम्पन्न गर्नका लागि विदेशी प्रविधि पनि चाहिन्छ । विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ । आन्तरिक लगानी पनि भरपुर चाहिन्छ, विदेशी लगानी पनि भरपुर चाहिन्छ । हाम्रो स्थिती राम्रो भएन भने, शान्तिसुव्यवस्था कायम भएन भने या अन्य केही भयो भने केही केही लगानीकर्ताहरु फर्केर जान सक्लान् तर आर्थिक संकट नै निम्तने गरि लगानीकर्ता पछि हट्छन् भन्ने हुँदैन ।